Ko firiji yehairi yengarava yakasiyana neyeiyo inowanzo?
Zvinokwanisika kusanganisa antifreeze ne antifreeze, kuti injini haizoiti here? kana pane imwechete, saka iwe haugoni, iwe haugone! iyo ichava antitosol. iyo motokari ichasvava. Zvechokwadi kwete, izvi ndizvo ...
Mibvunzo ye147 mu database yakagadzirwa mu 0,851 masekondi.